Navoaka i Mageia 3 | Avy amin'ny Linux
mofomamy | | Fitsinjarana, About us
Eny, araka ny voalazan'ny lohateny hoe, ny andro May 19 amin'ny 2013 ny kinova fahatelo amin'ity distro ity dia mikendry ireo mpampiasa vaovao sy ireo izay tsy tia milalao console matetika. Ity famotsorana ity dia ho fahatsiarovana Eugeni Dodonov, mpitarika fampandrosoana an'i Mandriva teo aloha, izay nodimandry tamin'ny taona lasa.
Amin'ny zava-baovao, tsy misy tena revolisionera, saingy tsy midika izany fa kely kokoa. Ireto ny endri-javatra manan-danja indrindra voalaza ao amin'ny fanambarana fanombohana:
RPM (4.11) sy fanavaozana urpmi, izay nahazo fanadiovana sy fanohanana tsara avy amin'i Mageia
GRUB no lozisialy boot loader. GRUB2 dia azo zahana.
Fonosana fametrahana sy fonosana rpmdrake nohavaozina
Nisy fanovana natao ihany koa tamin'ny logo raha ny fahitako azy ho tsara kokoa, manome endrika vaovao sy maoderina azy. Manantena aho fa ity kinova ity dia tsara na tsara kokoa noho i Mageia 2, izay tiako manokana. Hosedraiko hatramin'ny faran'ny herinandro hafa, amin'ny fotoana malalaka hitako.
Ampidino ny Mageia 3
loharanom-baovao: Fanolorana fanolorana (Blog Mageia)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Navoaka i Mageia 3
Distro tsara, na dia tsy tena havaozina matetika aza ny repositories, farafaharatsiny farafaharatsiny nanandramako azy, tamin'ny beta 2 ... heveriko fa
Farafaharatsiny farafaharatsiny, ity no mpiara-miasa amin'i Mint .rpm (izany hoe fanatsarana distro hafa izay nifantoka be loatra tamin'ny GUI fa tsy ny fampisehoana).
Miarahaba anao tamin'ny fandefasana azy.
Ny maha samy hafa azy dia tsy miankina amin'i Mandriva i Mageia, toa an'i Mint amin'ny Ubuntu :).
Tsy misy maharatsy ny fanatsarana ny asa efa vita, mifototra amin'ny Debian ny Ubuntu ary tsara izany, mifototra amin'ny Ubuntu ny mint ary koa, tombony azo avy amin'ny rindrambaiko maimaimpoana ihany izany.
Valiny tamin'i Jhon
Toa tsy ratsy amiko izany, raha ny tena izy toa lafatra amiko, tiako fotsiny ny hanazava fa tsy tanteraka tanteraka ny fampitahana anio.
Raha ny marina dia io ihany no zavatra tsy tiako tamin'ny fampiasako azy, ohatra ny Firefox 10 fony aho efa teo amin'ny kinova 17 (hatramin'ny nampiasan'izy ireo ny kinova Extended Support Release). Ny zavatra izay, rehefa zatra manana ny tena be indrindra ny olona iray, dia tsy mahazo aina ianao.
Fantatrao ve fa mageia dia mihodina famotsorana na azo havaozina tsy misy endrika toy ny Fedora?
tsy mihodinkodina i mageia.
Tsy mihodinkodina izy io fa mieritreritra aho fa azo havaozina amin'ny kinova manaraka io nefa tsy apetraka intsony.
Araka ny nolazain'izy ireo dia tsy mandeha izy io, saingy heverina fa afaka havaozina amin'ny sary sasany, raha tsindrio ny bokotra fampidinana ny lahatsoratra dia handefa anao any amin'ny pejy fisintomana (mazava ho azy hehe: P) misy fizarana misy ireo sary hanavaozana tsy mametraka indray.
Ny zavatra niainako niaraka tamin'i Prosody sy Pidgin
Ny dingana apetrakao amin'ny Debian + KDE + Firefox + LibreOffice